Dowladda oo sheegtay in howlgal lagu dilay Xubno Shabaab ah - Wardeeq 24 TV
Home Warar-ka Dowladda oo sheegtay in howlgal lagu dilay Xubno Shabaab ah
Howlgal ayaa Ciidanka xoogga dalka waxaa ay ka sameeyeen duleedka degmada Xudur ee Xarunta Gobolka Bakool, kadib markii Al-Shabaab ay weerar kusoo qaadeen Saldhigyada Ciidamada dowladda ee degmadaasi, waxaana Saraakiisha Ciidamada ay sheegeen in howlgalka ay uga hortagayeen weerarka Al-Shabaab.
Howlgalka ayaa waxaa sigaar ah u fuliyay Ciidamada Guutada 9-aad qeybta 60-aad ee gobolka Bakool, waxaana Ciidanka dowladda iyo Al-Shabaab uu dagaal xoogan ku dhexmaray degaannada Mad-Waraabe iyo Farag oo 7 km duleedka kaga beegan degmada Xudur ee Xarunta Gobolka Bakool.
Taliyaha Guutada 9aad qeybta 6aad ee Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Gaashaanle Dhexe Cali Ibraahim Isaaq ayaa sheegay in Ciidamada oo ka jawaabaya weerarkii Al-Shabaab ay khasaaro xoogan gaarsiiyeen, isla markaana ay ka dileen Shan dagaalame lix kalena ay ka dhaawaceen
Sidoo kale waxaa uu sheegay in howlgallada ka dhanka ah Ururka Al-Shabaab ay kasii wadi doonaan degaannada hoostaga degmada Xudur, wuxuuna u mahad celiyay Ciidamadii ka hortegay weerarkii Al-Shabaab.
Degmada Xudur ayaa waxaa ay kamid tahay degmooyinka ay go’doomiyeen Al-Shabaab, waxaana xilliyada qaar ay ku qaadaan weeraro qorsheysan.
Previous articleAMISOM oo shaacisay goobta lagu fulin doono xukunka dilka ah ee lagu riday askartooda
Next articleShil Gaari Khasaaro Geystay Oo Ka Dhacay Burco